Mootummaan Yamani fi Gareen Huusii magaalaa Hudeeydaa fi naannawa isii keessatti dhukaasa dhaabuuf kan walii galan tahuu gabaafame - NuuralHudaa
Mootummaan Yamani fi Gareen Huusii magaalaa Hudeeydaa fi naannawa isii keessatti dhukaasa dhaabuuf kan walii galan tahuu gabaafame
Mootummaan Yamani fi gareen Huusii marii nageenyaa torbee dabre Siwidin keessatti jalqaban kan itti fufan yoo tahu, magaalaa Hudeeydaa tan buufata doonii qabdu keessatti lola geggeefamaa jiru dhaabuuf kan walii galan tahuu ibsame. Magaalaan Hudeeydaa too’annaa garee Huusii jala kan turte yoo tahu, walii galtee ammaa kanaan “magaalattiin bulchiinsa ummataa jalatti akka deebitu” kan jedhu tahuu gabaafame.
Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees sirna walii galtee kana irratti argamuun ibsa kenneen, “gareen lamaanuu waraana isaanii buufata doonii fi Magaalaa Hudeeydaa keessaa baasuu dabalatee, guutuu naannichaa keessatti dhukaasa dhaabuuf walii galanii jiru” jedhe. Mr Gutaarees itti dabaluudhaanis, adeemsa raawwii walii galtee kanaa ilaalchisee gareen lamaan marii isaanii itti fufuun, guyyoota itti aanan keessatti kan murteessan tahuu hime.
Yamanitti itti gaafatamaan addaa UN Martin Griffith akka jedhetti , ammas gareen lamaan buufata Xiyyaara Sana’aa banuu dabalatee, dhimmoota heddu irratti mariin geggeessaa jiran ni milkaaha abdii jedhu kan qabu tahuu ibse. Marii nageenyaa Siwidiin magaalaa Rimboo keessatti geggeefamaa jiru kana dhaabbatni mootummoota gamtoomanii kan qopheesse yoo tahu, gareewwan Yaman keessatti lola irra jiran hundi walii galtee araaraa guutuu tahe irra akka gahaniif dhaabbatichi carraaqqii isaa kan itti fufu tahuu beeksise.